Standard na Atumatu - Ningbo Sunsoul
Strong propulsion na-mgbe sitere a siri ike n'ime isi.
Sunsoul proactive na irè ụlọọrụ ụkpụrụ nduzi bụ ihe ndabere maka ngwa ngwa uto nke ụlọ ọrụ. The na-arụsi ọrụ na mgbalị onye nke ọrụ na Sunsoul ọtụtụ afọ nwere ike chịkọtara n'ime ise ụlọọrụ ụkpụrụ e depụtara n'okpuru ebe, nke nyeere aka na-akwalite ụlọ ọrụ si na-eto na akụkụ dị iche iche dị ka nnyocha na mmepe, ụkpụrụ, mmekorita uru, ọrụ ibu na ụlọọrụ ibu ọrụ.
• Eme Ahịa ịsọ mpi
Ahịa na-isi ihe na-anyị ihe ịga nke ọma. Anyị na-eso ahụmahụ anyị na ndị ahịa anyị na-enye sara mbara ngwọta maka ha iji nweta ha ebumnobi rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè.
• Innovation eduba ná Future
Innovation bụ anyị lifeblood. Anyị ihe ịga nke ọma ka nrọ n'ime teknụzụ na ngwaahịa. Anyị mbepụ bụ creativity na ahụmahụ.
• Eme Company Uru
Anyị n'ịwa uru ibu iji hụ na adigide ịga nke ọma site leveraging anyị ezi azụmahịa Pọtụfoliyo. Anyị na-agbalịsi ike izu okè na ma na-agbaso mma.
• Ghọta na Dream of n'ọrụ
Kasị pụta ìhè ọrụ na ntọala maka anyị ụlọ ọrụ nke ọma. Anyị ụlọ ọrụ omenala e ji resilience, nghọta na nkwanyerịta ùgwù. Anyị na-agba anyị ọrụ na-alụ na-eto eto ọnụ na ụlọ ọrụ.
• Makụọ Social Ibu Ọrụ
Anyị na-arụ na-akwalite elekọta mmadụ na mmepe usoro site mma, aro na otutu teknụzụ. Anyị na-kwara na eluigwe na ala ụkpụrụ, mma ụlọọrụ amaala na a ike na gburugburu ebe obibi. Ike n'Ezi eduzi anyị na omume anyị n'ebe anyị ọrụ, azụmahịa mmekọ na oke n'akụ.
Quality Policy: Rihanna maka Excellence
• Zero Ndidi maka ntụpọ
Anyị na-eme na-eduzi n'ebe rigorous izere ọ bụla odida na ngwaahịa na Filiks. Anyị tụlee Zero ntụpọ ka a mgbaru ọsọ. Anyị na-akwado Ịhazi mma nke ngwaahịa na Filiks.
• Ahịa Afọ Ojuju
Anyị na-eme bụ ahịa lekwasịrị anya na anyị na-agba mbọ ka ịzụlite a ọma mmekorita site ná mmalite, site n'itinye irè oru ngo na nhazi management ka olu esenyịn, niile ofụri lifecycle.
• n'ihu Improvement
Anyị ụkpụrụ na ọrụ ya bụ nọgidere mma anyị competitiveness. Inwe na-omimi mgbọrọgwụ-akpata analysis site n'itinye PDCA na isii Sigma quality ngwaọrụ, ngwa ngwa na Ịhazi mma ka ngwaahịa na usoro, mma omume na-ekere òkè dị ka nke ọma dị ka innovations bụ ntọala nke na-amụba mma na arụpụtaghị ihe.
• entrepreneurial Mmụọ, ikike & banyere ịzụ
• Anyị na-agba na-entrepreneurial spirit, ikike na aka nke anyị ọrụ site nọgidere na n'usoro na-emepe emepe na tinye n'ọrụ ha ihe ọmụma, ahụmahụ na nkà.
• Environmental, Occupational Health na Safety Policy
• Anyị na-ahụ maka anyị gburugburu ebe obibi enyi na enyi nkwa, erube isi site iwu na ndị ọzọ na-achọ, ma na-na-eke a mma na ahụ ike na-arụ ọrụ niile ọrụ mgbe niile.
• Ịzụ ọrụ 'mmata na nchekwa na ahụ ike, anyị na-agba niile ọrụ isonye metụtara nchekwa na ahụ ike mmụta.
• Anyị na-amata na o kwere omume gburugburu ebe obibi metụtara n'oge nkebi nke ngwaahịa na usoro mmepe. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị iji gbochie ma ọ bụ ịkwụsịlata mmetọ.
• Anyị na-iwelata adị pollutants na ịrụzu mmetọ n'ichepụta usoro, site na-aga n'ihu na ndozi na niile ọrụ na-arụ.
• Iji ekwe nkwa a mma, ike na a pụrụ ịdabere na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi bụ akụkụ nke anyị na-elekọta mmadụ ọrụ.
Okwu: No.360.Qiushi Road, Haishu Mpaghara, Ningbo, China